Apple weputara Beta 2 nke iOS 16 maka iPhone | Akụkọ iPhone
Apple igwe onyonyo
Ngwa na egwuregwu
Apple weputara iOS 2 Beta 16 maka iPhone
Mmepe nke iOS 16, sistemụ arụmọrụ ga-eru ndị ọrụ iOS na iPadOS niile n'ime nkeji iri na ise ikpeazụ nke 2022 yana na anyị na iPhone News na-enyocha omimi iji gwa gị akụkọ ya niile.
Mmepe nke ihe dị mkpa adịghị echere, ọ na-aga nwayọọ nwayọọ ma n'ezie, oleekwa otú ọ ga-esi bụrụ ihe ọzọ, Apple ewepụtala iOS 16 Beta 2 maka ndị ọrụ etinyere ụdị a maka ndị mmepe ga-enwe ike imelite ngwa ngwa.
N'ụzọ doro anya, yana iOS 16, iPadOS 16 Beta 2 ga-abata, nke ị nwere ike ịwụnye yana watchOS 9. Otú ọ dị, ozi ndị ọzọ gbasara macOS Ventura ga-echere.
Ka ọ dị ugbu a, iOS 16 Beta 2 ejikọtala nkwado nke "captcha". nke ahụ ga-eme ka anyị kwụsị ọrụ ndị a ebe ọ bụ na usoro ahụ ga-amata anyị dị ka ndị ọrụ na-akpaghị aka na ya mere anyị agaghị "edozi" ha ịbanye na ibe weebụ ma ọ bụ ikpo okwu nke anyị nwere mmasị.
Ka ọ dị ugbu a, akụkọ ahụ bụ naanị na njikarịcha sistemụ. Anyị na-echetara gị na iPhone na-ekpo ọkụ nke ukwuu na ntinye nke Beta a na, dị ka ọ dị na mbụ, ọ na-emetụta ikike nke ngwaọrụ ahụ n'ụzọ na-adịghị mma.
Ka imelite site na OTA (N'elu ikuku) iOS 16 Beta naanị gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Mmelite ngwanrọ na ọ ga-apụta na-akpaghị aka.
Enwere ike itinye iOS 16 Beta 2 na ngwaọrụ ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ozi IPhone » iOS » iOS 16 » Apple weputara iOS 2 Beta 16 maka iPhone
Na-ahụ maka data: AB Internet Networks 2008 SL
Pọdkastị 13x35: Achọpụta iOS 16 na ndị ọzọ
Telegram na-ewepụta nhọrọ ịkwụ ụgwọ ya n'okpuru ọkọlọtọ adịchaghị
Chọpụta onye ọrụ gị
Lelee Free iPhone
Denye aha na anyị free akwụkwọ akụkọ